မျိုးကြီး – ယူလိုက်
Posted by gooodrun | Posted in Music
*** Original Lyrics Book *****
ဇဏ် – ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကမ္ဘာ
၀၁ ။ တစ်နေ့
၀၂ ။ ရိုးရိုးလေးချစ်တယ်
၀၃ ။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကမ္ဘာ
၀၄ ။ ရင်ထဲကအလွမ်း
၀၅ ။ Goddess of Mystery
၀၆ ။ မင်းတစ်ယောက်တည်း
၀၇ ။ ဘ၀တစ်ခု
၀၈ ။ ပြောင်းလို့မရ
၀၉ ။ ဘ၀ခရီးသည်
၁၀ ။ အဖြေ
၁၁ ။ ရိုးရိုးလေးချစ်တယ် ( Orchestra Remix )
၁၂ ။ ရှိနေမယ်
နမူနာ – ရိုးရိုးလေးချစ်တယ်
Tiger Girls – ကျားမလေးများရဲ့ နှစ်
*** Tiger Girls – ကျားမလေးများရဲ့ နှစ် [ CD ]
၃။ မင်းအကြောင်း ငါ့အကြောင်း
၄။ အချစ် = အမှိုက်
၇။ ခုတစ်ယောက် နောက်တစ်ယောက်
၁၀။ Little Sister
ရဲလေး – တတိယကာရန် [ VCD ]
Posted by gooodrun | Posted in Music , Video
*** ရဲလေး – တတိယကာရန် [ VCD ] ***
၀၁ - နတ်သမီး ( ရဲလေး ၊ အစ္စဏီ)
၀၂ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ( သားကြီး ၊ ရဲလေး)
၀၃ - နံပါတ်ဝမ်း ( ရဲလေး ၊ သားကြီး ၊ ထိန်လင်းစိုး)
၀၄ - မင်းနဲ့ပျော်ချင်လို့
၀၅ - မဟုတ်ရပါဘူး
၀၆ - မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး ( ရဲလေး ၊ အိမ့်ချစ် )
၀၇ - ဘာစားမလဲအစ်ကို( ရဲလေး ၊ ထိန်ဝင်း )
၀၈ - ငါဘာမှမသိ( ရဲလေး ၊ jenny )
၀၉ - ရိုးမြေကျ
၁၀ - ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို
၁၁ - အားလုံးအတူတူ( ရဲလေး ၊ ဂျိုကာ )
၁၂ - သိစေချင်တယ်( ထိန်ဝင်း ၊ ရဲလေး )
၁၃ - ၀မ်းတူး ၀မ်းတူး( ရဲလေး ၊ ဂျိုကာ )
၁၄ - ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ်
၁၅ - တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း ( ရဲလေး ၊ သားကြီး )
၁၆ - နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး ( ရဲလေး ၊ အိမ့်ချစ် ၊ လွမ်းပိုင် & Bobby Soxer) VCD
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - မက်လောက်စရာ [ VCD ]
*** ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - မက်လောက်စရာ [ VCD ] ***
၀၁ - မက်လောက်စရာ
၀၂ - ပြန်တော့ကွယ်
၀၃ - လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝ (feat: အာဇာနည်)
၀၄ - ကမ်းခြေ
၀၅ - ချစ်ခဲ့တာလား၊ ရူးခဲ့တာလား
၀၆ - လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး
၀၇ - အလွမ်းဆုလာဘ်
၀၈ - ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း (feat:စန္ဒီမြင့်လွင်)
၀၉ - ချစ်ခဲ့ဘူးလား…ဖြေပါ
၁၀ - ပြန်ခေါ်ချင်တယ် (feat:အယ်လွန်းဝါ)
၁၁ - မိန်းကလေး
၁၂ - မှားပြီနော်
၁၃ - ချစ်နေတော့လည်း
၁၄ - ဆုံချင်တယ်
Google Operating System 2010 ( google ရဲ့ OS အသစ် ပါ .... )
Posted by gooodrun | Posted in Applications
Google Operating System 2010 - google ရဲ့ OS အသစ် ကို install လုပ်စရာမလိုပဲ CD ပေါ်ကနေ
boot တက် ပြီး သုံးလို့ရပါတယ် ......
DivX Plus v8.0 Build 1.0.0.643 ( avi & video များကို ကွာလတီ ကောင်းကောင်းနဲ့ ခံစား မယ် )
avi အပါအ၀င် video format တော်တော်များများကို ကွာလတီ ကောင်းကောင်းနဲ့ ခံစား မှုပေးမဲ့ DivX Plus v8.0 .............
The next generation of DivX video! Download DivX Plus™ Software to play DivX, AVI, MKV, MOV and MP4 video with our media player. Or watch these videos in other popular media players like Windows Media Player or Media Player classic. Purchase DivX Pro to create your own HD DivX videos.
© All Rights Reserved. လန်းတယ်